Dziviriro midziyo Manufacturers - China Dziviriro midziyo Suppliers & Factory
ZR-1220 Mask fit tester
ZR-1220 mask fit tester chishandiso chakakosha chekuyedza masiki uye mafemuro, izvo zvinoenderana neOSHA uye GB 19083-2010 zvinodiwa zvehunyanzvi zvemasiki ekurapa.Iyo inoshanda zvakanyanya kune yakakodzera bvunzo uye kuongororwa kwezvigadzirwa zvekufema nevagadziri vekufema uye masangano ekuongorora ekudzivirira evashandi vemunyika.
ZR-1211 mask resistance tester inoshandiswa kuyedza inhalation uye kufema kufema kuramba kwemasiki mune yakarongwa bvunzo mamiriro.Inoenderana nehuwandu hwekuyerera mareti, inokodzera kuita zvinoenderana nekuongorora uye bvunzo dzemasiki kune vanogadzira masiki, nyika dzekuongorora masangano ezvishandiso zvekudzivirira vashandi.
ZR-1201 Mask resistance tester inoenderana neYY 0469-2011.Inotora nzira yekuyerera kwemhepo yekuyedza kusiyanisa kudzvinyirirwa kwemasiki kana kuyerera kwemhepo kunodhonzwa kuchipfuura imwe nzvimbo yemask.Inoshanda kune masangano ekuongorora michina yekurapa, vagadziri vemasiki uye ane hukama madhipatimendi ekutsvagisa.
ZR-1006 mask yefekitari yekusefa inoshanda uye kuyerera kwemhepo inopikisa tester inoshanda kuyedza chidimbu kusefa uye kuramba kwemhepo kwemasks uye mafirita enzvimbo dzekuongorora mudziyo wekurapa, nzvimbo yekuongorora yekuchengetedza, nzvimbo yekuongorora zvinodhaka, nzvimbo dzekudzivirira nekudzivirira zvirwere, nzvimbo yekuongorora machira, zvipatara uye masiki R&D vagadziri.
ZR-1002 mask particle protection effect tester
Iyo ZR-1002 mask particle protection effect tester ndeyeyedza chidimbu chekudzivirira mhedzisiro yemasiki nekuisa iyo yenyika yakajairwa musoro kubva mu500L yekuzvichenesa bvunzo kabati, wobva wapfeka mask mumusoro kubva, uye kuendesa iyo yakawanda median dhayamita. 0.6 ± 0.050) μm, concentration i20mg/m³ yeNaCl aerosol kana mass median dhayamita (0.3 ± 0.050) μm, concentration i20mg/m³ yeoiri aerosol mukamuri yekuzvichenesa yekuyedza, uye chimiro chemusoro chinoteedzera kufema mu sinusoidal. , uchishandisa mafotometer ekukwira nekudzika kwemvura kuona kuwanda kwemunyu aerosol neoiri aerosol isati yasvika uye mushure me mask kuti uongorore chidimbu chekudzivirira mhedzisiro yemask.
Mask Viral Filtration Efficiency (VFE) Detector
Madimikira makuru eiyo ZR-1000A mask hutachiona kusefa inoshanda zvakanaka (VFE) tester inoenderana neYY/T1497-2016 <Kuongorora nzira yekuyedza yehutachiona hwefiltration kunyatsoita (VFE) yezvekurapa inodzivirira kumeso mask zvinhu-Nzira yekuyedza uchishandisa Phi-X174 bacteriophage. >, Iyo nzira yekaviri gasi nzira panguva imwe chete yekuenzanisa sampling inovandudza kurongeka kwesampling.